कोकाकोला खाएको १ घण्टामा तपाईंको शरीरमा यस्तो हुन थाल्छ !
एजेन्सी । सफ्ट ड्रिंक्ससँग जोडिएको एउटा समाचारले विश्वमा खलबली मच्याएको छ । ब्रिटेनका पूर्व फार्मास्टिक नीरज नाइकले आफ्नो एक ब्लगमा कोल्ड ड्रिंक्स खाएपछि शरीरको भित्र हुने प्रभावका बारेमा केही कुरा बाहिर ल्याएका छन् ।
उनले यस ब्लगमा कोकाकोला खाएकोडेली मेलका अनुसार नाइकले एक ग्राफिकका माध्यमबाट बताएका छन् कि कोल्ड ड्रिंक्सले शरीरको आवश्यक खनिज पदार्थ बाहिर ल्याउँछ र मानिस मानसिक र शारीरिक रुपमा बदलिन थाल्दछ ।
पहिलो १० मिनेट
जब तपाई एउटा कोकाकोला खानुहुन्छ तब तपार्यको शरीरमा १० चम्चा चिनी भित्र जान्छ । योमात्रा २४ भण्टामा लिएको चिनीको मात्रा बराबर हुन्छ । अचानक यति मिठो खाइपछि तपाईलाई बान्ता पनि हुन सक्छ तर त्यसमा मिसीएको फास्टोरिक एसिडका कारण यसो हुँदैन ।
कोक आएको २० मिनेटपछि खाने मानिसको ब्लड सुगर एकदमै बढ्छ ।
जसका कारण शरीरको लिबरले शरीरमा प्रतिक्रिया गर्छ र माटोपना बढ्न जान्छ ।
त्यसपछि उसको शरीरमा क्याफिनको मात्रा छिट्टै बढ्दै जान्छ । अर्कोतर्फ ब्लड प्रेसर पनि बढ्दै जान्छ । जसका कारण तपाईको लिबरले रगतमा अझ बढी चिनीका मात्रा पुर्याउँछ । अनि मस्तिष्कमा रगत जान कम हुन्छ ।
त्यसपछि तपाईको शरीरलाई मादक पदार्थ सेवन गरेको जस्तो लाग्दछ । शरीरले डोपामाइनको उत्पादन बढाउँछ र दिमागको खुसी दिने भाग सक्रिय बनाउँछ ।
खाएको १ घण्टापछि तीन प्रक्रिया हुन्छ ।
१. फास्फोरिक एसिडले तपाईको शरीरको भित्रि भागमा क्याल्सियम, मेग्निसियम र जिंकलाई एकस्थानमा जम्मा पार्छ । जसका कराण मेटाबोजिल्म बढ्छ । चिनी र अन्य आर्टिफिसियल मिठासको बढ्दो मात्राका कारण मेटाबेल्जिक अरु बढ्छ । यसपछि मानिस पिशाब फेर्न जानछन् र केल्सियम बाहिर निक्लिन्छ ।
२. क्याफिनलाई तरल बनाउने गुणले असर देखाउन थाल्छ । अनि तपार्यलाई पटकपटक पिशाब लाग्न थाल्छ ।
जसका कारण तपाईको शरीरबाट क्याल्सियम, मेग्निसियम र जिंक र सोडियम बाहिर जान्छ जुन तपाईको हड्डीमा जानुपर्ने हो ।
३. जसरी यो प्रक्रिया हुन्छ । मिठोपनको असर बढ्दै जान्छ । अनि तपाई अल्छी बन्न थाल्नुहुन्छ । कोकमा भएको पानी यूरिनद्धरा बाहिर निक्लन्छ ।
चंगाचेट (कविता) - निभा शाह
पेस्तोल देखाएर श्रीमतीसंग बर्दीमै टिकटक बनाउने सईलाई लुभु इन्चार्जको जिम्मा
यस कारण एन्फा अध्यक्ष शेर्पाविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयलमा पर्‍याे उजुरी
सांसद चौधरीले भनिन् : संसदमा भारतीय चेलीहरुको दादागिरी चल्न थाल्यो
‘रुकुम घटना छानविनका लागि दलित सांसदको नेतृत्वमा संसदीय समिति बनाइयोस्’ : कांग्रेस
को बन्ला एक महिनापछि प्रहरीको नयाँ आईजीपी ?
सीमा सुरक्षा गर्न हिउँ छिचोल्दै हिल्सा पुग्यो सशस्त्र प्रहरी
गुम्यो लक्ष्मीको सहारा : तीनबर्ष अघि पतीको मृत्यु, छोरा मलेसियामा अलपत्र
मदन भण्डारी बिर्सिएकि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी